ဗိုင်းရပ်စ်မှန်သမျှ Masks အသုံးပြုတာတစ်ခုတည်းနဲ့ မကာကွယ်နိုင်!? - JAPO Japanese News
လာ 03 Feb 2020, 16:39 ညနေ
လက်ရှိကမ္ဘာတစ်၀ှမ်းလုံးက ကူးစက်ခြင်းခံရတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ကတော့ သိကြတဲ့အတိုင်းပဲ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။
အဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကိုကာကွယ်ဖို့ Masks တပ်ကြပါလို့ပြောကြပေမဲ့၊ လက်တွေ့မှာတော့ အဲ့လောက်အထိ သက်ရောက်မှုမရှိပါဘူး။
ကာကွယ်ဖို့ သက်ရောက်မှုအရှိဆုံးကတော့ အားလုံးသိကြပြီးဖြစ်တဲ့ ထိုအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။…..
တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ Wuhan ဒေသကနေအစပြုပြီးတော့ လက်ရှိကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးကို ကူးစက်သွားတာကတော့ ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးစိတ်သစ် ကိုရိုနာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ရန်ကုန်ကနေ ဝူဟန်ကို flightက transit တောင်မရှိဘဲ တိုက်ရိုက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်၊ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စပ်ကို ကူးစက်ခံထားရတဲ့လူနာက အချိန်မရွေးရောက်လာမှာ မပြောနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ လက်ရှိမှာတော့ အခြေအနေအရမ်းမဆိုးသေးဘူးပေါ့။
ဂျပန်နိုင်ငံမှာတော့ စစ်ဆေးချက်အရ လက်ရှိအချိန်အထိ ကူးစက်ခံနေရသူ အယောက်၂၀ တောင်ရှိနေပါပြီး!!!! လက်တလော သတင်းထဲမှာပါလာတာပါ။
ဒီကနေစပြီး ကူးစက်ခံရသူတွေဟာ နည်းသွားမှာမဟုတ်ဘဲ ပိုပြီးတောင် တိုးလာမယ်မဟုတ်လား?
ဘယ်သူ့အတွက်မှ အကျိုးမရှိတဲ့ ဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်က တိုင်းပြည်ထဲကိုရောက်လာမှာကို စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။
ဒါဆိုဘယ်လိုမျိုး ကာကွယ်မှုတွေလုပ်ထားမလဲ? လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ လူတွေအားလုံးက ပထမဦးဆုံးပြေးမြင်မိတာ Masks တပ်ဖို့ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား?
ဒါပေမဲ့ တကယ်ရောဂါသက်ရောက်နေတဲ့နေရာတွေမှာတော့ Masks တွေရောင်းကုန်သွားတာတွေရှိပါတယ်။
အင်တာနက် website တစ်ခုမှာရှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါ
Masks တစ်ဗူးကို 9690円ယန်း (မြန်မာငွေ ခန့်မှန်းချေ ၁ သိန်း ၃ သောင်းကျပ်!!!!)
ဒီ Masks ကဘယ်အချိန်ကနေစပြီးတော့ အဲ့လောက်အထိ စျေးအကြီးဆုံးပစ္စည်းဖြစ်သွားရတာလဲ…?
လူတွေက ဗိုင်းရပ်စ်ကိုကြောက်ပြီး Masks တွေကို လိုက်၀ယ်ထားကြလို့ပါပဲ။
ဒါပေမဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဖို့ Masks တွေတပ်ကြပါလို့ ပြောနေပေမဲ့၊ ဖြစ်လာရင် တကယ်ရော ကာကွယ်နိုင်လို့လာ?
Masks က ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဖို့တပ်တယ်ဆိုတာ အဓိပ္ပါယ်မရှိဘူး လို့ဆေးပညာရှင်တွေကလည်း သုံးသပ်ကြပါတယ်။ Masks ဆိုတာ ရောဂါကူးစက်ခံနေရတဲ့ လူနာတွေ နှာချေ၊ ချောင်းဆိုးလိုက်တဲ့အခါ သလိပ်တွေ၊ နှာရည်တွေ မလွင့်စင်သွားစေဖို့ ထုတ်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်ကတော့ Masks ဆိုတာ “ဗိုင်းရပ်စ် အခြားလူတွေဆီမကူးစက်အောင် ကာကွယ်ပေးတဲ့ ပစ္စည်း” ပါ။
လေထဲမှာရှိတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ကနေ မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့သက်ရောက်မှု လုံး၀မရှိဘူးရယ်လို့တော့မဟုတ်ပေမဲ့၊ ကာကွယ်ပေးနိုင်မှုရာခိုင်နှုန်းက အလွန်နည်းပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် မျက်နှာနဲ့ Masks ရဲ့ကြားမှာ ဟနေတဲ့နေရာက ရှိနေတဲ့အတွက် အသက်ရှူလိုက်တဲ့အခါတိုင်းမှာ လေထဲမှာရှိတဲ့ မမြင်ရတဲ့ဗိုင်းရပ်ပ်စ်တွေဟာ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းထဲကို ၀င်ပြီးသားပါပဲ။ ဒါကြောင့်မို့လို့ မကာကွယ်ပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောတာပါ။
အဲ့ဒါအပြင် Masks တွေကိုဘယ်လိုမျိုး စနစ်တကျထုပ်ပိုးပြင်ဆင်လဲဆိုတာ တော်တော်များများလည်း မသိကြပါဘူး။ တစ်ချို့ဆိုရင် နည်းလမ်းမမှန်တဲ့ပုံစံနဲ့ စီးပွားဖြစ်ထုပ်ပိုးရောင်းချတာမျိုးလည်း ရှိနေပါတယ်။
Masks က မကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်၊ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ဒီဗိုင်းရပ်စ်ရန်ကနေ မိမိကိုယ်ကို ကာကွယ်ကြမလဲ?
အမှန်တကယ် ကာကွယ်တဲ့နေရာမှာ သက်ရောက်မှုအရှိဆုံးကတော့ လက်ကိုမကြာခဏဆေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
မျိုးစိတ်သစ် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်လို့ ကြောက်အားလန့်အား ထိန့်လန့်နေကြပေမဲ့၊ တကယ်က ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဆိုတာ အအေးမိစေတဲ့ ဘက်တီးရီးယားပါပဲ။
ဒါကြောင့်မို့လို့ ပြောချင်တာက အအေးမမိစေဖို့ လက်ကိုမကြာခဏ ဆေးပေးပါ။ အရက်ပြန်နဲ့ ဆေးပေးရင်တော့ ပိုပြီးစိတ်ချရတာပေါ့။
နောက်ပြီး မယုံကြည်ရတဲ့ မီဒီယာတွေကနေ အရူးလုပ်တာမခံရပါစေနဲ့။ ဥပမာ (Masks ပြောင်းပြန်တပ်တဲ့ ကိစ္စ)
ထပ်ပြီးပြောရရင် ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ လေထဲကနေပဲကူးစက်နိုင်တာမဟုတ်ဘဲ မျက်လုံးအတွင်းသားကနေလဲ ကူးစက်နိုင်တဲ့အတွက် တတ်နိုင်သလောက် မျက်လုံးကို လက်နဲ့မပွတ်မိ အထိမိဖို့ သတိပေးချင်ပါတယ်။
အပြင်ကပိုးမွှားကိုကာကွယ်တာမဟုတ်ဘဲ၊ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာလဲ အာဟာရဓါတ်လုံလောက်အောင်စားပြီး အိပ်ရေးဝဝအိပ်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါသေးတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ခုခံစွမ်းအားကို မြင့်တင်ဖို့အတွက် အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။
တကယ်လို့ Masks တပ်မယ်ဆိုလည်း နှာခေါင်းနဲ့ ပါးစပ် ၂ ခုလုံးကိုသေသေချာချာ လုံနေအောင်ဖုံးကြပါ
အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ ပုံအတိုင်းပဲ၊ နှာခေါင်းနဲ့ မေးရိုးတို့က ထွက်နေမယ်ဆို ဘာမှမထူးတော့ပါဘူး။
နောက်ပြီး Masks ရဲ့ အပြင်ကမျက်နှာပြင်မှာ ဗိုင်းရပ်စ်တွေကပ်နေနိုင်တာကြောင့် Masks ကိုချွတ်မယ်ဆို Masks
ရဲ့ အပြင်မျက်နှာပြင်ကိုမထိဘဲ၊ နှာရွက်ဘက်က ကြိုးလေးကိုကိုင်ပြီး ချွတ်ကြပါ။
ချွတ်ပြီးတဲ့ Masks ကိုလည်း ချက်ချင်း အမှိုက်ပုံးထဲမှာ ပစ်ပြီးတော့ လက်ကိုသေသေချာချာလေး ပြန်ဆေးရအောင်နော်..
နိဂုံးချုပ်ပြန်ပြောရရင်တော့ တကယ်ထိရောက်တဲ့ ကာကွယ်ခြင်းနည်းလမ်းကတော့ လက်ကို မကြာခဏဆေးပေးဖို့ပါပဲ။ ဒါကိုပဲ သေသေချာချာလေး ကရုတစိုက်လုပ်ရအောင်။
ဒီလိုအချိန်မှာ လိုအပ်တာထက်ပိုအကြောက်လွန်ပြီး စျေးကြီးကြီးပေးရတဲ့ Masks တွေကို မရှိတဲ့ကြားက လိုက်ဝယ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ ပိုက်ဆံတတ်နိုင်ရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့။
တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ ကရုတစိုက် စနစ်တကျနဲ့နေထိုင်မှုက ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဆက်မပျံ့နှံ့သွားအောင် ရပ်တန့်နိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့လို့ ကိုယ့်ရဲ့ မိသားစုရော၊ သူငယ်ချင်းတွေကိုပါ ပြန်မျှဝေပေးရအောင်!!!!
ဗိုင်းရပ်စ်ကို မိနစ် ၃၀ တည်းနဲ့အခန်းတွင်းကထုတ်နိုင်ကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိ !!!
သင့်အိမ်မှာမှာလည်းရှိတဲ့ ကြောင်နတ်ဘုရား !!
Hanko ယဥ်ကျေးမှုနဲ့ ဂျပန်လုပ်ငန်းခွင်အကြောင်းတစေ့တစောင်း !!!
အနုပညာ? ယဥ်ကျေးမှုတွေလား? ဒါမှမဟုတ် ညစ်ညမ်းတာတွေလား? ဂျပန် anime တွေရဲ့ အရည်အသွေးဟာ မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်လာပါပြီ
အဲ ! ? ဒီလူတွေဒီလောက်တောင်ရနေတာလား? Anime လောကထဲက အားကျစရာဖခင်တွေရဲ့ တစ်နှစ်ပတ်လုံးဝင်ငွေ